TGIF ကို တစ်ယောက်တည်းပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်? – DigitalTimes
TGIF ကို တစ်ယောက်တည်းပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်?
တစ်ပတ်တာရဲ့အမောတွေ ခဏနားရတော့မယ့် သောကြာနေ့ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ် TGIF မှာရော ဘာတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိကြလဲ?
စုံတွဲလေးတွေကတော့ သေချာတယ် ဒိတ်လုပ်ကြမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Single တွေအတွက်တော့ သောကြာနေ့ညက ထူးမခြားနားဖြစ်နေသလို အထီးကျန်ကောင်းလည်းကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Weekend ကို ကျေကျေနပ်နပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလေးတွေလုပ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Single တွေမှရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဘယ်သူမဆို ပိတ်ရက်မှာ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုခုကြည့်ပြီး အပန်းဖြေကြည့်ပါ။ နိုင်ငံခြားကားဆိုရင်တော့ Games of Throne တို့လို စီးရီးတွေ၊ နိုင်ငံခြားကားမဟုတ်လည်း ကိုရီးယား၊ တရုတ် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်လိုက်ရင် တနင်္လာနေ့တောင် ရုံးမတက်ချင်ဖြစ်သွားပါဦးမယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံမှာတင်နေတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ ကိုယ်အရမ်းကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေပါလာရင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အဖော်ပြေးစပ်တတ်ကြသေးတာအကျင့်လိုဖြစ်နေတာပါပဲ။ အကယ်၍များ ဘယ်သူမှမလိုက်ရင် မကြည့်ဘဲနေတော့မှာလား? နိုးပါ။ တစ်ယောက်ထဲသွားကြည့်လည်းရနေတာပဲဆိုတော့ ဟာသကားဆိုလည်း အားရပါရအော်ရီ အဆွေးကားဆိုလည်းမျက်လုံးပေါက်မတတ်ငိုလိုက်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုသလို ကိုယ့်ကိုလည်းဘယ်သူမှကြည့်မနေတော့ စိတ်ပေါ့ပါးတာပေါ့။
ပွဲဆိုတာ ရှိုးပွဲဘာညာဆိုတာထက် မြို့ထဲမှာဘယ်လိုပွဲလေးတွေရှိလဲ? အဲ့ထဲကမှ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲလေးတွေသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြတိုက်တွေသွားပြီးအေးအေးဆေးဆေးကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်လည်း ပန်းခြံလို အေးအေးလူလူနေရာမျိုးသွားတာဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်တည်းလုပ်ရတာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အတူ အချိန်ဖြုန်းလိုက်ပါ။
၄. ညစာ ဒိတ်လုပ်ပါ
Single ပါဆိုမှ ဒိတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒိတ်လုပ်ပါ။ ကိုယ်စားချင်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျွေးမှပဲစားရမှာပါ။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လောက်ယူပြီး စားရင်းနဲ့စာအေးဆေးဖတ်ရတာလောက်ကောင်းတဲ့ ဖီလင်ရှိပါဦးမလား? ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တွေလို ဖုန်းနဲ့လက်ထပ်တော့မတတ် စားတဲ့အချိန်မှာတောင်ဖုန်းလက်ကမချတဲ့သူမျိုး မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဖုန်းကိုသဲသဲမဲမဲကြည့်နေတာမျိုး ရှောင်တာပိုစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။
Single ဖြစ်လည်း ဘားမှာ တစ်ယောက်တည်းသွားသောက်လို့ရတာပါပဲ (ကိုယ်တိုင်ထိန်းနိုင်ရင်) Bartender နဲ့စကားစမြည်ပြော အနည်းဆုံးတော့ တစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာပိတ်မိနေတာထက် စကားပြောဖော်ရတာပေါ့။ နေ့ခင်းဘက်ဆိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကောက်ဆွဲ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားပြီး အေးဆေးထိုင်ဖတ်နေလိုက်ပါ။
Gym သွားမှလို့မဆိုလိုပါဘူး။ YouTube ကနေ လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အကတွေလိုက်ကကြည့်ပါ။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေရင် တက်ကြွလာပြီး အားအင်တွေပြည့်နေသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၈. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါတီလုပ်ပါ
ကိုယ်လိုပဲ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ပိတ်ရက် အားနေတဲ့သူတွေရှိရင် စုကြည့်ပြီး ပါတီပေးပါ။ စုပြီးတစ်ခုခုချက်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အသောက်လည်းနည်းနည်းနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ သရဲကားတွေစုကြည့်ပါ။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
တကယ်ကို တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် အထီးကျန်လိုက်တာလို့ တွေးမိခံစားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းကိုပဲကောက်ကိုင် Facebook ပဲပွတ်နေမယ့်အစား ဒီထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု သေချာပေါက်လုပ်ကြည့်ပါ။ တကယ်မိုက်ပါတယ်။ TGIF တိုင်းကိုအေးဆေးဖြတ်သန်းနိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ရင်း….
၆.၂ လက်မ မျက်နှာပြင်နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘောပင်ပါတဲ့ LG Stylo4ကို မိတ်ဆက်ပြီ
iPhone အတွက် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး App များ